क्रेडिट के मतलब छ? वित्तीय लिङ्कमा परिभाषा हेर्नुहोस्
सुरु ऋण wiki मिलियन क्रेडिट
एक लाख ऋण के हो?
der मिलियन क्रेडिट एक बैंकिंग मा प्रयोग गरिएको शब्द हो। तपाईं कल्पना गर्नुहुनेछ कि ऋण पनि उपलब्ध छ र उपभोक्ताहरूको सामान्य रकम भन्दा बाहिर बसे। यो तपाईंको रुचि हो कि एक ऋण राशि को राशि निश्चित मापदण्ड र नियमहरु को अधीन छ। लाखौं ऋण लाखौं मा एक ऋण हो जुन उधारकर्ता वा बैंकिङको उधार उधारकर्ता इकाई लाई दिइएको छ। पैसा रकम वा अझ राम्रो रकमको मात्रा एक लाख र अधिक यूरो छ।
मिलियन क्रेडिट र रिपोर्टिंग को महत्व
विशेष गरी आर्थिक संकटको समयमा, यो देखाइएको छ कि बैंकिङ र उधारकर्ताहरूले अस्थायी रूपमा व्यापार गतिविधिको कुल क्रेडिट मात्राको वास्तविक अवलोकनलाई हराएको छ। पहिले देखि नै अन्तिम शताब्दीको विश्व आर्थिक संकटमा तिब्बतहरुमा, लाखौं को क्रेडिट एक धेरै नैतिक भूमिका निभाईयो। भागमा, परिस्थितिहरू उठाइयो जसमा बैंकहरू अब थाहा थिएन कुन ऋण र ऋण धेरै उधारकर्ताहरूलाई लाखौंको मात्रामा दिइयो। यसबाट, जिम्मेवार शिक्षकले पाठ तयार गरेका छन् र यसको लागि सोध्नु भएको छ र लाखौं यूरोको लागि रिपोर्टिङ दायित्व प्रस्तुत गरेका छन्। पहिले नै 1934 यो नियमन कानून थियो र यो कानूनसँग यसको महत्त्व रहेको छ लाखौं क्रेडिट यूरो आज। आजको रिपोर्टिंग थ्रेडहोल्ड यूरोमा लाखौं क्रेडिटका लागि3मिलियन छ। विवरणहरू आज विभिन्न नियमहरू र अधिक उधारकर्ताहरू लाखौं ऋणहरूका लागि आवेदन सार्वजनिक कानूनको कानुनी व्यक्ति हुन्। मिलियन क्रेडिट को रिपोर्टिंग Bundesbank को साक्ष्य केन्द्र मा बनाइयो। लाखौं क्रेडिट विशेष सुविधा हो र प्रतिक्रिया सहित रिपोर्टिंग दायित्व अधिक अनियमितता को विरुद्ध एक हेज पनि छ र लाखौं मा क्रेडिट बैंकबाट एकै पटकमा प्रदान गर्नबाट बच्न। यी वैधानिक आशय र नियमहरू छन्, जुन व्यवहारमा राजधानीको प्रवाह रोक्न सक्दैन। मिलियन डलर ऋणहरू आकर्षक छन् र तपाईंले देखाउनुहुन्छ कि यस प्रकारको वित्तपोषण पनि धेरै अनुमति दिन्छ। विशेष गरी अर्थव्यवस्थामा, यी ऋणहरू अनिवार्य रकमहरू धेरै प्रभावशाली लगानी उपायहरू सुरक्षित गर्नका लागि हुन्।
एक सामान्य व्यापार लेनदेनको रूपमा लाखौं क्रेडिट
उपभोक्ताको रूपमा, तिनीहरू आफैलाई मात्र एक लाख डलरको ऋण प्रयोग गर्नेछन्। यद्यपि, तिनीहरूले निश्चित रूपमा क्रेडिट आवश्यकताहरु र कम्पनीहरु र संस्थाहरूलाई लाखौं मा ऋण संग आफ्नो तरलता सुरक्षित पनि एक आवंटन को एक विचार छ। विशेष गरी धेरै सक्रिय कम्पनीहरूले लगानी गर्न सस्तो ऋण प्रयोग गर्छन्। यस प्रकार को वित्त पोषण को लागी ऋण सामान्यतया प्रयोग गरिन्छ र विधायकले केहि नियमहरु लाई यहां सेट गरेको छ ताकि एक कम्पनी को ऋण को स्थिति को स्पष्ट पारदर्शिता देख सकें। यस व्यक्तिमा ऋणको लागी व्यक्तिको रूपमा आवेदन गर्ने उधारकर्ताहरू प्रायः धेरै दुर्लभ हुन्छन्। उही तेस्रो पक्षमा यी ऋणहरूको स्थानान्तरणमा लागू हुन्छ। यहाँ, पनि, दायित्व र निगरानी रिपोर्ट गरेर यी क्रेडिटहरू पास गर्ने कुनै तरिका छैन। राज्यले अधिक उधारोपनलाई यहाँ सुरक्षित गर्दछ र यस स्तरमा ऋणको मात्रा सामान्यतया उधारकर्ता एकाइहरूद्वारा लिखित हुन्छ। ऋणको स्तर सधैँ एक महत्वपूर्ण सूचकांक मान हो, जसले कम्पनीको भविष्यलाई पनि सबै प्रकारका कम्पनीहरूमा असर गर्छ। लाखौं क्रेडिट आफैमा आकर्षक छ र वास्तवमा व्यवसायको संसारमा अधिक छ। लाखौं क्रेडिटहरूले राज्यको कुल ऋण र कम्पनीलाई महत्त्वपूर्ण डिग्रीमा असर पार्छ। यहाँ, सीमाहरू स्पष्ट रूपमा पुगिसकेका छन् जुन निजी परिवारहरूको सामान्य कल्पना भन्दा बाहिर जानुहोस्। अधिकांश अवस्थामा, यी कर्जालाई लगानी कार्यक्रम र लगानी उपायहरू सुरक्षित गर्न आवश्यक छ, जुन तिनीहरूको पदार्थ ऋणको धेरै छिटो चुकौतीको गारंटी दिन्छ। यद्यपि, यी लगानीहरू हड्ताल भएका छन् र क्रेडिट जोखिम यस प्रकारको क्रेडिटमा विशेष आवश्यकताहरूको विषय हो।
अघिल्लो लेखKulanter क्रेडिट